चिकित्सक लाइसेन्स परीक्षा : विदेशमा पढेका ३६ पटकसम्म फेल | Educationpati.com
२०७४ फागुन ८ गते ०९:०८मा प्रकाशित
काठमाडौं । नेपालको मेडिकल शिक्षाको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठेका वेला विदेशमा अध्ययन गरेका चिकित्सक ३६ पटकसम्म फेल भएको तथ्य पत्ता लागेको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लिने चिकित्सक लाइसेन्स परीक्षामा विदेशमा अध्ययन गरेर आएका चिकित्सकले ३६ पटक अर्थात् १२ वर्षसम्म निरन्तर परीक्षा दिँदा पनि पास गर्न नसकेको तथ्य खुलेको हो ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. धर्मकान्त बास्कोटाले नेपालको मेडिकल शिक्षा अब्बल रहेको दाबी गरे । ‘नेपालको मेडिकल शिक्षाको गुणस्तरमा हालसम्म कुनै घुनपुत्ला लागेको छैन,’ उनले भने, ‘काउन्सिलले वर्षको तीनपटक चिकित्सक लाइसेन्स परीक्षा लिँदै आएको छ । नेपालमा अध्ययन गरेका चिकित्सकले बढीमा दुईपटकमा लाइसेन्स परीक्षा पास गरेका छन् । तर, विदेशमा पढेर आएका ८० प्रतिशतले ३६ पटकसम्म पनि पास गर्न सकेका छैनन् ।’
कहाँ जान्छन् फेल भएका डाक्टर ?
एमबिबिएस अध्ययन सके पनि मेडिकल काउन्सिलले लिने लाइसेन्स परीक्षा पास नगर्दासम्म डाक्टरले स्वास्थ्योपचारमा संलग्न हुन पाउँदैनन् । यदि कोही बिरामी जाँच्ने कार्यमा संलग्न भएको पाइए त्यो गैरकानुनी ठहरिनेछ । तर, ३६ पटकसम्म फेल भएर परीक्षा दिन छाडेका डाक्टर के गरिरहका छन् भन्नेमा काउन्सिलका पदाधिकारीलाई नै कौतुहल जागेको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिस्ट्रार डा. दिलीप शर्मा गैरकानुनी रूपमा लुकेर स्वास्थ्योपचारमा संलग्न भएको हुन सक्ने बताउँछन् । ‘डाक्टर बन्ने नाममा करोडौँ रुपैयाँ सकेका छन् । तर, पटक–पटक लाइसेन्स परीक्षा दिँदा पनि असफल भएका उनीहरू लुकेर बिरामीको सेवामा लागेको हुन सक्छ,’ शर्माले भने ।
अर्जुन अधिकारीले नयाँ पत्रिकामा खबर लेखेका छन् ।